Hex Madaxa Is-garaaca, Heerka Drywall, Wood Screw - DD
WAA INAAN BIXINTA MACLUUMAAD DHEERAAD AH
Tilmaanta Magaca Hex Washer Madaxa Isukeenida Qulqulka Bilaawga Dabaaldega Brand DD Fasteners Heerka DIN / GB / ANSI / BS FOB Qiimaha $ 0.01 ~ $ 0.08 / gabal Xeerar Bixinta T / T Qalabka Birta / Birta Kaarboonka Dhameystiray Znic Plated / Buluug caddaan ah zinc Saddexaad 13mm ~ Awoodda Sahayda ee 350mm 5000tons / bishii Adeegga OEM Haa Min.Order Tirada 1Ton / Konteenarada Baakad & Bixinta Faahfaahinta Xirmooyinka Baakadaha / Sanduuqyada / Xirmooyinka Dekadda Tianjin / Qingdao
Tilmaanta Magaca Hex Madaxa Flange Isugeedka Daminta Xawaaraha DD Fasteners Heerka DIN / GB / ANSI / BS FOB Qiimaha $ 0.01 ~ $ 0.08 / gabal Shuruudaha Bixinta T / T Qalabka Birta / Kaarboonada Birta Dhamaatay Znic Plated / Buluug cad cad zinc Lixaad 13mm ~ 350mm Alaab siisitaan Awood Siinta Awoodda 5000tons / bishii Adeeg Adeegga OEM Haa Min.Order Tirada 1Ton / Konteenarada Baakad & Faahfaahinta Xirmooyinka Baakadaha / Sanduuqyada / pallet Port Tianjin / Qingdao
Mashiinka Maskaxda ee La-dagaallanka Maskaxda ee Maskaxda
Sharaxa Magaca Magaca Ka hortagga Burburka Hex Madaxa Birta Dheecaanka Xawaaraha DD Fasteners Heerka DIN / GB / ANSI / BS FOB Qiimaha $ 0.01 ~ $ 0.08 / gabal Shuruudaha Bixinta T / T Qalabka Birta / Kaarboonka Birta Dhamaatay Znic Plated / Buluug cad oo zinc Saddexaad 13mm ~ 350mm Awoodda Sahayda Awoodda bixinta 5000tons / bishii Adeegga OEM Haa Min.Order Tirada 1Ton / Konteenarada Baakadaha & Bixinta Xirmooyinka Baakadaha / Sanduuqyada / pallet Port Tianjin / Qingdao
Drywall Screw (buluug iyo caddaan)
Sharaxa Magaca Magaca Drywall Screw (buluug iyo caddaan) Nooca Badeecada Dardarmarowga DIN / GB / ANSI / BS FOB Qiimaha $ 0.01 ~ $ 0.08 / gabal Shuruud Bixinta T / T Qalabka Birta / Kaarboonka Birta Dhamaatay Znic Plated / Buluug cad oo zinc Saddexaad 13mm ~ 350mm Awoodda sahayda Kartida 5000tons / bishii Adeegga OEM Haa Min.Order Tirada 1Ton / Konteenarada Baakadaha & Bixinta Xirmooyinka Baakadaha / Sanduuqyada / pallet Port Tianjin / Qingdao
Phillips CSK madaxa Chipboard Screw
Sharaxa Magaca Magaca Phillips CSK madaxa Chipboard Screw Brand DD Fasteners Heerka DIN / GB / ANSI / BS FOB Qiimaha $ 0.01 ~ $ 0.08 / gabal Shuruudaha Bixinta T / T Qalabka Birta / Kaarboonka Birta Dhamaaday Znic Plated / Buluug cad cad, Lixaad 13mm ~ 350mm Alaab Bixin Awood Siinta Awoodda 5000tons / bishii Adeeg Adeegga OEM Haa Min.Order Tirada 1Ton / Konteenarada Baakadaha & Bixinta Xirmooyinka Baakadaha / Sanduuqyada / pallet Port Tianjin / Qingdao
Waxaan ka soo dhoofsannay dhammaan qalabyada Taiwan ama Gemany. Ka sokow, waxaan sidoo kale haysannaa nidaam maarayn tayo oo dhameystiran oo saynis ah, koox xirfadlayaal R&D ah iyo karraaniyayaal farsamo. waxaan dhisnay casri, heer sare, heer sare, noocyo badan oo xajiyeyaal dhammeystiran oo khadadka waxsoosaarka, iyo wax soo saarka sanadkii ee shirkadeena waa in kabadan 50,000 oo tan. Waxaan had iyo jeer u dhignaa baahida macaamiisha iyo alaabada tayada sare inay tahay ujeeddadeena hawlgalka waxaanna ku helnay aqoonsi ballaaran warshadaha.
Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Dareemada
Waxa jira laba farqiyadood oo u dhexeeya biinanka iyo kala-baxa: 1. Bolts guud ahaan waxay u baahan yihiin in loo isticmaalo marka loo eego nuts. Xalaaladuhu waxay si toos ah ugu-sawiran karaan shaxanka muruqyada gudaha ah; 2. Boltsyadu waxay u baahan yihiin in lagu xoqo oo lagu xiro masaafad xoog leh, qufulka qufulku waa yar yahay. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa ...
Maxay yihiin booska ku habboon?
Boolal si ballaaran ayaa loo adeegsadaa. Biraha wax lagu xardho ayaa ka mid ah isku xirayaashayada caadiga ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa afarta qaybood ee soo socda: 1. Saxanka birta aan birta lahayn, saxanka birta, saxuunta birta ka samaysan, qalabaynta injineernimada. 2. Qeybta iftiinka ee darbiga birta daahyada ah iyo rakibaadda kale ee gudaha iyo dibedda. 3. Gene ...
Shuruudaha dayactirka agabka saxda ah ee mashiinka qoditaanka
Mashiinka qodista qodistu waa qayb saldhig farsamo, oo baahi weyn leh. Badanaa, biinanka, biinanka, ribbooyinka, iwm, si loo hubiyo nabadgelyada ama uma baahna inay tixgeliyaan saameynta heerkulka, jawiga xun ama xaaladaha kale ee shaqada ee khatarta ah. Waxyaabaha caanka ah waa bir naxaas ah, hooseysa ...
Qalabka adkeynta sare
Astaamaha adkaynta adayg sarreeya ayaa ah fasalka 8.8, Fasalka 9.8, fasalka 10.9, xajiyeyaasha 12.9. Qalabka adkeynta sare waxaa lagu gartaa adkaanta sare, waxqabadka gantaalaha wanaagsan, waxqabadka farsamada wanaagsan, isku xirnaanta sarreeya, waxqabadka seismic wanaagsan, iyo fududahay iyo ...
Senco DS225-18V Duraspin Gawaarida Qufulka Gawaarida Gacanta-On Review
Diraspin Auto-Feed Screw Driver waa Senco DS225-18V Xawaare xawaare sare ku socda oo ah aalad u qaadaysa wax qabadkaaga heerka ku xiga. Iyada oo leh qaabab qaabaysan oo qaabeysan, waxaad ku safri doontaa marinkaaga xiga ama shaqada subfloor. Kooxda ka dambeysa Senco Duraspin DS225-18V Durasping Au ...